हाम्रो मायामा बैरीको आँखा लागेको हुनुपर्छ, टुट्यो : नायिका रिमा विश्वकर्मा - JanaSanchar.com
हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्छौं, तर सहिदका सपना मर्न दिदैंनौं : बिप्लव, महासचिब, ने.क.पा.नेकपा (माओवादी)द्वारा सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बिचको तीन बुंदे सहमतिलाई “आत्मसमर्पण” को संज्ञापुर्वघोषित “प्रतिगमनकारी सरकार”संग सहमति पछि बिप्लव राजधानीमा, आज अब एकीकृत जनक्रान्ति कसरी के हुने भन्ने बारे बोल्नेनेपाल भारत सीमामा प्रहरी र तस्करबिचको भिडन्त : एक भारतीय तस्करको मृत्युडोटीको बुडर बजार नजिकै शिक्षक भट्टराई मृत भेटिए
मुख्य समाचार(२०७७ फाल्गुन २२, शनिबार)हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्छौं, तर सहिदका सपना मर्न दिदैंनौं : बिप्लव, महासचिब, ने.क.पा.
मुख्य समाचार(२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार)नेकपा (माओवादी)द्वारा सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बिचको तीन बुंदे सहमतिलाई “आत्मसमर्पण” को संज्ञा
मुख्य समाचार(२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार)पुर्वघोषित “प्रतिगमनकारी सरकार”संग सहमति पछि बिप्लव राजधानीमा, आज अब एकीकृत जनक्रान्ति कसरी के हुने भन्ने बारे बोल्ने
मुख्य समाचार(२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार)नेपाल भारत सीमामा प्रहरी र तस्करबिचको भिडन्त : एक भारतीय तस्करको मृत्यु
(२०७४ फाल्गुन २२, मंगलवार)
रिमा विश्वकर्माका पहिचान धेरै छन् । पत्रकार, नायिका हुँदै उनी चर्चित उनीले दर्जन चलचित्र तथा विज्ञापनहरुमा अभिनय गरेकी छिन् । परिवारसहित बेलायत बस्दै आएका व्यापारी रोवर्ट ल्वागुन विश्वकर्मासँग बिबाह गरेकी अभिनेत्री रिमा विश्वकर्माको पछिल्लो समय वैवाहिक जीवन बिग्रिएपछि चर्चामा छिन् । उनै रिमासँगको रेजिना पाण्डेको जम्काभेट :
तपाईंको सम्बन्धबिच्छेदको भएको हो भन्छन् नि, कसरी ?
हो, कसरी बिग्रियो मलाई पनि थाहा भएन । मैले राम्रो गर्दागर्दै पनि सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेपछि सम्बन्ध बिच्छेद भएको हो ।
कतै ‘इगो’को समस्या त होइन ?
ममा तँ इगो केही थिएन । हामी एक अर्कामा धैरै विश्वास गर्दथ्यौं । किन आघात भयो मलाई थाहा छैन ।
यो सम्बन्ध बिच्छेदले तपाईंको करिअरमा कत्तिको असर पर्ला ?
असर गर्छ जस्तो लाग्दैन । जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छन् । सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने म मात्र एक्लो व्यक्ति होइन । पीडामा बस्नु भन्दा पनि राम्रो काम गरेर व्यस्त हुन चाहन्छु, डिभोर्स भएपछि करिअर अघि बढिरहन्छ ।
अचानक यस्तो घटनाले जीवनमा कस्तो असर ग¥यो ?
पाउनु÷गुमाउनु आफनो ठाउँमा छ । जीवनमा जति उतारचढाव आए पनि आफ्नो काम निरन्तर गर्नु नै पर्छ । म मेरो काममा कुनै पनि मेरो व्यक्तिगत कारणले असर पार्दिनँ । काम आफ्नो ठाउँमा छ, व्यक्तिगत जीवन आफ्नो ठाउँमा छ । म आफनो कामलाई व्यक्तिगत कारणले डुबाउन चाहन्नँ । विवाहपछि मैले काम गरेको होइन, विवाह अघि नै मेरो करिअर सुरु भइसकेको थियो, अब पनि चलिनै रहन्छ ।
धेरै नायिकाहरुको वैवाहिक जीवन उतारचढाव देखिन्छ, किन होला ?
अरुको कारणबारे त मलाई थाहा छैन । मेरो बारेमा भन्नुपर्दा सायद हाम्रो मायामा बैरीको आँखा लागेको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय तपार्इं सिनेमामा भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा नै बढी व्यस्त देखिनुहुन्छ, नि किन ?
थौरै समयमा मिठो काम गर्न पाउने भएर हो । तर, चलचित्रमा पनि कामहरु आइरहेका छन्, मैले गरेका चलचित्रहरु पनि सफल भएका छन् ।
कामको चाप कत्तिको छ ?
छ, म्युजिक भिडियो, इभेन्ट र चलचित्रको कामहरु आइरहेका छन् ।
कुन चलचित्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
केकी अधिकारीले निर्माण गरेको चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेसमा व्यस्त छु । लगभग काम सकिएको छ ।
चलचित्रभन्दा पनि नेपाल आइडल कार्यक्रमबाट तपार्इं धैरै चर्चित हुनुभयो, होइन ?
हो, ‘रियालिटी सो’ भएकाले धैरैले हेर्ने भएकोले पनि होला ।
तपार्इं आफूलाई नायिका मोडल, पत्रकार या के भन्न रुचाउनु हुन्छ ?
खासमा म पत्रकारिताबाट यस क्षेत्रमा आएको हुँ । त्यसपछि अलग–अलग काम गर्न थाले । जुन रुपले काम गरे पनि मेरो क्षेत्र ग्लामरस नै भएको हिसाबले मलाई जुन काम गर्छु भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
पेशामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सोचेजस्तो नभए पनि सन्तुष्ट छु । भर्खर मात्र त करिअर अघि बढेको छ, अझ धेरै गर्नुछ ।
कलाकार बन्नको लागि सुन्दरता महत्वपूर्ण कि अभिनय ?
दुवै कुरा कला क्षेत्रको लागि एकअर्काका पूरक हुन् ।
अबका तपाईंका योजनाहरु के के छन् ?
अहिलेलाई यही कलाक्षेत्रमा नै राम्रो भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने सोच राखेको छु । नयाँ भावी योजना केही पनि छैन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७४ फाल्गुन २२, मंगलवार) 1388 Viewed
- हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्छौं, तर सहिदका सपना मर्न दिदैंनौं : बिप्लव, महासचिब, ने.क.पा.
- नेकपा (माओवादी)द्वारा सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बिचको तीन बुंदे सहमतिलाई “आत्मसमर्पण” को संज्ञा
- पुर्वघोषित “प्रतिगमनकारी सरकार”संग सहमति पछि बिप्लव राजधानीमा, आज अब एकीकृत जनक्रान्ति कसरी के हुने भन्ने बारे बोल्ने
- नेपाल भारत सीमामा प्रहरी र तस्करबिचको भिडन्त : एक भारतीय तस्करको मृत्यु
- डोटीको बुडर बजार नजिकै शिक्षक भट्टराई मृत भेटिए
हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्छौं, तर सहिदका सपना मर्न दिदैंनौं : बिप्लव, महासचिब, ने.क.पा.
नेकपा (माओवादी)द्वारा सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बिचको तीन बुंदे सहमतिलाई “आत्मसमर्पण” को संज्ञा
पुर्वघोषित “प्रतिगमनकारी सरकार”संग सहमति पछि बिप्लव राजधानीमा, आज अब एकीकृत जनक्रान्ति कसरी के हुने भन्ने बारे बोल्ने
नेपाल भारत सीमामा प्रहरी र तस्करबिचको भिडन्त : एक भारतीय तस्करको मृत्यु
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीद्वारा नेपाली महिलामाथि गरिएको हातपातबिरुद्ध बेलहिया नाकामा नेपालीहरुको प्रदर्शन
ओलीबिरुद्ध कांग्रेसलगायत चार प्रमुख पार्टी एकजुट, संसद शुरु हुँदाको दिनमै अविस्वासको प्रस्ताब पेश गर्ने सहमति
हतियार बुझाउन सरकारी वार्ता टोलीको प्रस्ताव आएपछि दियो बिद्रोही ने.क.पा.को वार्ता टोलीले यस्तो जवाफ
रोल्पाका बोहरालाई बिभत्स तरीकाले हत्या गर्ने मूडभरीलाई आजीवन काराबासको सजायं, छोरीलाई सफाई
बाघको आक्रमणबाट मुस्ताङमा २२ च्याङ्ग्रा मरे, तीन वटा हराए
पोखराको भलाम-मौजा कच्ची सडक खण्डमा फेरी अर्को एक मजदुर मृत भेटिए